Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Dutch Myron Boadu Childhoodmụaka Akụkọ Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Eke
Ihe omuma anyi nke Myron Boadu na-agwa gi ihe omuma banyere akuko nwata ya, mbido ya, ndi nne na nna, ezin’ulo ya, enyi nwanyi / nwunye ya ibu, ibi ndu, ndu onwe onye na uru ya.
Na nkenke, anyị nwere ebe a akụkọ ihe mere eme nke ndị ọkachamara na-agba ọsọ Dutch nke sitere na Amsterdam. Lifebogger na-amalite akụkọ Boadu site n'oge ọ bụ nwata ruo mgbe o nwetara egwuregwu na ama.
Iji mee ka akụkọ ọdịmma onwe gị na-atọ gị ụtọ na ọdịdị nke Biography nke Myron Baodu, anyị na-ewetara gị ọrụ ndụ ya. Ọ na-agwa akụkọ Dutchman, nri?
Myron Boadu: Lee ndụ nwata ya, Roadzọ na-ewu ewu akụkọ ndụ na ihe ịga nke ọma Akụkọ.
Ee, onye ọ bụla maara Myron na Pace gọziri agọzi. N'ikwu nke a, ikike ya ịkwụsị mere ka ọ bụrụ onye mgbaru ọsọ nke oge a (lee ihe akaebe n'okpuru). Ọ bụghị ihe ijuanya UEFA kpọrọ Boadu aha dị ka otu n'ime ndị na-agba ọsọ iri ise maka ọdịnihu.
N'agbanyeghị nsọpụrụ, anyị na-aghọta - na ọ bụ naanị ole na ole n'ime ndị Fans maara Life Life of Myron Boadu. Anyị akwadebela ya maka ịhụnanya bọọlụ. Ugbu a na-ebuteghị ọzọ, ka anyị gaa n'ihu na ndụ nwata ya.
Myron Boadu Storymụaka Akụkọ:
Maka ndị na - ebido Biography, a mụrụ ya na ndị nne na nna Ghan. Myron Boadu bịara n'ụwa n'ụbọchị 14 nke Jenụwarị 2001 na ebe amụrụ ya, Amsterdam, na Netherlands.
N'ezie ọ bụghị nwa mbụ, anyị maara Myron nwere ụmụnne nwoke abụọ ndị tọrọ Reginald na Leandra Boadu. Ọ bụ otu n'ime ụmụ nwoke abụọ (ikekwe nwa ikpeazụ) amụrụ site na njikọ dị n'etiti Ghanian Papa na Mama.
Dị ka nnyocha si kwuo, a bulitere Boadu nanị n'akụkụ otu obere okwute nke ama egwuregwu Ajax a ma ama. Ndị nne na nna ya bụ ndị Ghana zụlitere ya na ọdịbendị West Africa ha kpọmkwem na Amsterdam's Biljmermeer-district.
Ezinụlọ ezinụlọ Myron Boadu bụ naanị 4 nkeji ụgbọala gaa Ajax Stadium.
Dịka nwatakịrị, gburugburu ebe obibi Myron mere ka ọdịnihu ya pụta. Jụọ anyị otu?… Ndị mụrụ ya gbazitere ụlọ nke dị naanị 4 nkeji ụgbọala gaa na Ajax's Johan Cruyff Arena. N'ụzọ dị ịtụnanya, obere Myron nwere ike ịnụ abụ na-akwado ndị Ajax site na ime ụlọ ya.
Myron Boadu toro na nwanne ya nwoke, Reginald Boadu. Anyị maara nwanne ya nwanyị nke a maara dịka Leandra Boadu. Dị ka ụmụaka, ụmụ nwoke abụọ ahụ bụ ndị na-eri egwuregwu bọọlụ, Myron na-akwado Ajax na Manchester United dịka nwatakịrị.
Igwe Dutch ahụ tọrọ ntọala ya n'okporo ámá egwuregwu Ajax - nke dị nso n'ụlọ ezinụlọ ya. N'oge ahụ, Myron Boadu ga-eso football nwanne ya rie nri, Reginald - site n'ụtụtụ ruo mgbe ndị mụrụ ya kpọrọ ha abụọ maka nri abalị. N'ikwu okwu banyere ahụmịhe ahụ, ọ kwuru otu oge;
N’IME NTUO M, M SORO KA EBONYA M NWERE MYM MY MMADTHER M. Anyị mere ya n'èzí n'okporo ámá na HALLWAY n'ime ụlọ obibi anyị.
HAHA, Ibanye bọọlụ na imebi ihe dịka ifuru ifuru, Oge ụfọdụ ewepụ ndị mụrụ m dị nzuzu. Ha NA-atụ Egwu Mgbe Niile Ihe Ga-emebi. MA NA-EZI ỌROD N 'SITE NA NTOrobịa, NBỌP WASB WAS AKW LKWỌ.
You maara? My Ma Myron na Reginald ga-akwụsị ịgba bọọlụ bọọlụ tupu elekere iri nke mgbede. Nke a bụ iji zere ọgba aghara sitere na ndị agbata obi. Ma n'echi ya, ha nọgidere na-eme ya n'ehihie. Ka ọ na-eme nke ahụ, nwatakịrị ahụ amataghị na ọ na-akwadebe maka ọdịnihu ya.
Ezigbo ezinụlọ Myron Boadu:
O yikarịrị ka ezinụlọ nke bi n'etiti obodo nwere ike ịba ọgaranya. Bijlmer bụ otu n'ime ógbè ndị Amstamdam ahụ - dị nso na ama egwuregwu Ajax. Ndị bi ebe a na-enweta nnukwu ego nke ibi ndụ.
Eziokwu ahụ bụ na ndị nne na nna Myron Boadu biri ebe ahụ na-egosi otu ihe -na ha bara ọgaranya na karịa nzụlite etiti.
Dabere na Darkwa, onye bụ ezigbo enyi Myron na nwata, nne na papa ahụ gburu ya rụrụ ọrụ dị ukwuu n'ịhụ na ọ nweghị ọrịa ụmụaka. Ha kụziiri ya ịdọ aka ná ntị ma nwee mmasị na ihe ọ chọrọ ịbụ na ndụ.
Ndị na - agba ọsọ n'etiti ndị 243 175 (1.41%) nke ndị ojii ojii Europe nke ndị agbụrụ Sub Sahara Africa bi na Netherlands. Ọ bụ ezie na a mụrụ ya dị ka onye Dutch, Boadu sitere na Africa. Dị ka ndị Ghana si kwuo, aha nna Boadu sitere na Afrika ma pụtara "onye inyeaka".
Maapụ a kọwara ezinụlọ Myron Boadu.
Myron Boadu Mmụta na Bulọ Ọrụ:
Na-etolite na Bijlmer, nke dị nso na Johan Cruyff Arena (ama egwuregwu Ajax), so na ihe ndị kpaliri mmasị ya n'ịgba bọọlụ. Myron, N'ajụjụ ọnụ, mere ka ndị agbụrụ mara na ọ kwenyere n'echiche nke agụmakwụkwọ mana ọ naghị eche banyere klaasị ya. N'okwu ya;
Ndị bịara ụlọ akwụkwọ abụghị n'ezie m cup nke tii. Ihe na-aga nke ọma na m na klas, mana m dị njọ na ịgụ na ịhazi. ANA M EGWU OMLỌ MGBE MGBE EGO.
AKW WASKWỌ KWES :RORE: N'IME afọ iri, ihe m nwere mmasị na ụlọ akwụkwọ belata. N'oge ahụ, amalitere m ikwenyere na m nwere ike ịghọ ọkachamara ọkachamara n'egwuregwu bọọlụ.
Myron Boadu Football Akụkọ:
Ka ọ na-erule afọ 10, talent Boadu malitere ịdị ka eke, dị ka amụrụ ya ka ọ gbaa bọọlụ. Amsterdammer gbasoro nzọụkwụ Reginald (nwanne ya nwoke nke okenye). O mechara sonye n'òtù nwanne ya nwoke - FC Bijlmer.
Afọ abụọ mgbe nke ahụ gasịrị (afọ 12), Myron Boadu hapụrụ akwụkwọ ya kpamkpam mgbe ọ matara football bụ nhọrọ dị mma. N'oge a, ọ gbanwere SC Buitenveldert. Nke a bụ ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Dutch ọzọ na obodo Amsterdam. Dị ka a hụrụ na maapụ dị n'okpuru, klọb ọhụrụ ya bụ naanị okwute si na mbụ.
N'oge nke abụọ ya na SC Buitenveldert, nnukwu klọb nwere agụmakwụkwọ ka mma malitere igosi mmasị na ya. N'ime ndị ahụ bụ Ajax, nke kacha nso n'ụlọ ezinụlọ ya. Myron rọrọ nrọ ehihie na abalị ịbanye na Ajax. Otu ndi otu ndi ozo choro ya bu; AZ, FC Utrecht na Almere City.
Myron Boadu Biography - Uzo A Ma Ama Akụkọ:
N'ịghọta na ọ bụ otu n'ime ụmụaka na-enwu gbaa na agbata obi Amsterdam, Ajax bịara bụrụ nke siri ike ịkpọ nwa ahụ maka nnwale. Iji nweta uto nke ogo ya, ha tinyere Myron na nkuzi.
Na mbu, ihe niile gara nke ọma, ruo mgbe ndị ntorobịa Ajax kpọrọ ya - maka ebumnuche ọ maghị. Myron Boadu atụghị anya na ọ ga-esi na nzukọ ahụ pụta.
N'ụzọ dị ịtụnanya, Ajax gwara ya na ọ dịghị mma. Nke a bịara mgbe ha na-ele ya anya ka ọ na-azụ naanị ugboro atọ ma na-egosipụta na egwuregwu egwuregwu. N'ikwu okwu banyere ndakpọ olileanya, Myron kwuru;
Naanị otu egwuregwu, enwetara m otu ugboro, echere m na m gara nke ọma. Ekwenyesiri m ike na ha ga-ekewapụta m maka otuto.
Mgbe m bara maka mkparịta ụka nke onwe, ọ juru m anya ịnụ na m ga-alaghachi Buitenveldert, otu ndị otu m ochie.
Akụkọ ọjọọ ahụ wutere Boadu nke ukwuu. Mgbe nwatakịrị ahụ dara ogbenye rutere n'ụlọ ezinụlọ ya, anya mmiri gbara ya. Ndị nne na nna Myron Boadu kasiri nwa ha obi, na-emesi ya obi ike na Ọ BBGH, onye ọ bụla, ọbụnadị Ajax, nwere ike iwepụ ìhè na Footballing Hope.
Ọnwa ole na ole ka e mesịrị, Myron Boadu nwetara nkasi obi ya. Iji obi ya dum, AZ Alkmaar nyere nwa anyị nwoke ihe obi ya chọrọ. Mgbe ha nọ ebe ahụ, ikike ụmụ okorobịa nwere ihe ịga nke ọma site na usoro ntorobịa ha.
Myron Boadu Biography - Akụkọ nke Successga nke Ọma:
Na 3 Septemba 2016, kwalitere ya na AZ, ebe o meriri na mbido ya. Ọchịchọ kasịnụ ya n'oge ahụ bụ iji nweta ọkpụkpọ oku otu. Iji mezuo atụmanya ahụ, Myron Boadu nọgidere na-arụsi ọrụ ike.
N'oge nke atọ ya, ọ nyeere ndị otu ya okpueze dị ka ndị egwuregwu bọọlụ nke obere maka Tweede Divisie. Nke a bụ ndị kasị elu na-amu amu football otu na Netherlands. Ihe mgbaru ọsọ mgbaru ọsọ Boadu hụrụ ka ndị otu AZ ya na-akwaga na nkewa.
Na 2017, ọ hụrụ mgbe ọ bụ nwata - ka akpọrọ ya na ndị otu mbụ nke AZ. Ghọ onye pro, nwaafọ Amsterdam bidoro imebi ndekọ. Adu Boadu ghọrọ onye ọkpụkpọ kachasị ọkpụkpọ akara akara maka AZ na Eredivisie, afọ 17 na 212 ụbọchị. Lee ihe mgbaru ọsọ ise na-egosi na ọ bụ onye na-eti ụwa.
Akụkọ nke Arsenal:
Ndị na-egwu Gunners bụ ndị mbụ nyere onyinye maka nwata. Mgbe ọ dọsịrị onye njikwa mbụ nke Arsenal, Arsene Wenger na talent Boadu, onye agha ahụ kpọrọ ndị njem gaa London.
Mgbe ahụ, Arsenal gbalịrị ịrafu ya, n'amaghị na ndị na-aga n'ihu achọghị ka a kpọọ ha n'azụ Pierre-Emerick Aubameyang na nke French Alexandre Lacazette. Boadu kpebiri ịhapụ njem ahụ, na-ekwenye na ọ ga-enwetakwu oge egwuregwu ma ọ bụrụ na ọ nọrọ na AZ. O kwuru otu oge;
Agaghị m echezọ oge m banyere n'ụgbọelu iji zute Arsene Wenger na London. Echere m na ọ nwere ike ịbụ ụbọchị dị mkpa ná ndụ m.
A sị na m kwuru na m ga-ekwe nkwekọrịta ahụ, ọ gaara akpata ezinụlọ m ọtụtụ ihe. Enweghị ụzọ m ga - esi bido ha.
Arsenal nyere m onyinye mara mma, mana enwetakwara m onyinye ka mma site na AZ.
Ebumnuche ọzọ ịjụ Arsenal na ndụ ka mma na AZ:
Dika anyi tinyekọtara akwụkwọ Myron Boadu a, ọ bịanyela aka na nkwekọrịta ka mma ugbu a, bụrụkwa nwata nwoke ama ama na otu mbụ nke AZ. Dị ka nwatakịrị si kwuo, klọb nwere ọtụtụ ụmụ nwoke nke ọgbọ ya, dịka, mmasị Gabriel Martinelli na Bukayo Saka na ndị ọzọ, adịghị amasị ya. Nke a bụ ihe ọzọ mere na Onye Dutch gburu jụrụ Arsenal.
Myron Boadu kwenyesiri ike na ọ gaghị akwa ụta ịjụ ndị Gunners. N'ikwu nke a, ọ dịghị ihe ga - egbochi ya imezu nrọ ya - ọbụnadị nnukwu mmerụ ahụ ọ nwere, nke mebiri ọrụ ya tupu ọ bido.
A na-elele nwatakịrị ahụ anya dị ka diamond kachasị na-egbu maramara na njikọ Dutch. N’ịghọta dị ka onye kachasị nwee isi na 18 dị na Europe, ọsọ ọsọ na ike Myron emewo ka ọ bụrụ onye na-azụ ahịa n’oge a.
Ọụ nke nne na nna ya na ụmụnne ya, ọ na-ejide ndekọ ahụ dị ka onye egwuregwu bọọlụ izizi amụrụ na 21st narị afọ abụọ iji gosipụta ma akara maka Ronald Koeman si Netherlands mba otu.
Obi abụọ adịghị ya, ụwa bọọlụ na-achọ ịgbara nwa nwoke ọhụụ ọhụụ bụ onye ọ ga-etolite ịghọ otu n'ime ebumnuche kacha mma n'ụwa. Ndị ọzọ, dị ka anyị na-ekwu banyere Biography, bụ akụkọ ihe mere eme.
Ndụ Myron Boadu - Ndụ Nwanyị, Nwunye, Nwa?
Chụso ọrụ ịgba bọl adịghị mfe. Maka Myron, imere onwe ya aha na egwuregwu ahụ na-egosi na ọ nwere ihe ịga nke ọma. Ọzọkwa, anyị maara na n'azụ onye ọ bụla na-agba ọsọ na-aga nke ọma na-abịa WAG mara mma.
N'oge a, anyị ekpebiela ịba ụgbụ anyị na World Wide Web iji chọọ Enyi ma ọ bụ Nwunye Myron Boadu.
Mgbe emechara nnyocha kpụ ọkụ n'ọnụ, anyị ghọtara - na onye mgbaru ọsọ ebumnuche emebeghị ka mmekọrịta ya ọha na eze - n'oge ọ na-ede Biography. Onweghị ihe ịrịba ama nke enyi nwanyị, nwunye ka ọ bụrụ ma ọ bụ nwatakịrị. N'ihi ya, ọ ga-abụ na ndị ezinụlọ ya gwara ya ka ọ nọrọ n'alụghị di ma ọ bụ nwunye - ọkachasị n'oge a dị mkpa ọrụ ya.
Ndụ nke Myron Boadu:
Nwere ike ịmara ya dị ka onye egwu ọgbara ọhụụ nwere mmụọ pụrụ iche maka ịme goolu. Agbanyeghị, ọ bụ obere ihe amaara banyere ndụ onwe ya. N'ebe a, anyị ga-agwa gị ihe niile gbasara Myron Boadu - pụọ na football.
Nke mbụ, ọ bụ onye na-ekwenyeghị ịkwatu ndị ọzọ. Agbanyeghị, Myron ekwuola otu oge na ọ na-enwe ihe mgbu nke ịkwatu ya - otu ugboro na ndụ ya. Ọ chọpụtara na ọ na-adịkarịrị ọtụtụ ndị mfe ịkatọ ndị ọzọ kama iwulite ibe ha.
Ndị Dutch na-agba ọsọ bọọlụ bụkwa onye na-akpalite mmetụta dị mma na ndị mmadụ. Myron anaghị eleda onye ọ bụla anya ọ gwụla ma ọ na-enyere ha aka. Ghara ichefu, ọ hụrụ n'anya ịme ịma aka bọọlụ dị jụụ na azụ ụlọ ya.
Ndụ Myron Boadu:
N'ezie ndị na-agba ụkwụ na-adị umeala n'obi na-agbachi nkịtị banyere mmezu ha. Ihe omuma atu zuru oke ma oburu na Myron Boadu. N'agbanyeghị na ọ bụ ọgaranya na-esite na ezinụlọ nwere ntụsara ahụ, ọ ka bụ ọgwụ na-egbochi ndụ dị oke ọnụ.
Rongbọ ala Myron Boadu:
Onye ọkpụkpọ ahụ kpughere ndị mgbasa ozi mgbasa ozi ya n'otu oge - echiche nke ihe ụgbọ ala ya dị ka ya. Na-ekpe ikpe site na foto a, anyị chọpụtara na ọ na-ahọrọ ịnya ụgbọ ala ọkara n'agbanyeghị ọtụtụ puku Euro na-aga n'akpa uwe ya kwa izu.
Ndụ Myron Boadu Ezinụlọ:
N'akụkụ a, anyị ga-egosipụta eziokwu banyere ezinụlọ nke Amsterdammer nke amụrụ na mpaghara Ajax mana ụlọ ọrụ Dutch jụrụ ya.
Banyere ndị nne na nna Myron Boadu:
Papa na mama na-aga n'ihu bụ ndị nwere mmasị na-arụ ụlọ egwuregwu. Zing nyochaa egwuregwu bụ ihe gbasara ezinụlọ n'ezinụlọ Myron Boadu. Nwoke AZ gosipụtara n'oge a na mkparịta ụka ya na akwụkwọ akụkọ Dutch, De Telegraaf. O kwuru;
Anyị na-ele ọtụtụ egwuregwu na OMLỌ. ND P MARR THE M NNA B S NDP ỌKACHAMARA NA Schịkọta ỌR MY M. ỌT TIMT TIM oge, M na-ele bọl na nna m na nwanne m nwoke anya.
Ajax-pụọ, Ajax-ụlọ, PSV-pụọ na egwuregwu AZ niile bụ mama ya na papa ya.
Banyere nwanne Myron Boadu:
Reginald bụ onye malitere ịhụnanya bọọlụ n'ezinụlọ ya. Ọ bụ nwa mbụ nke ezinụlọ ahụ ma kpọọ ya Nnukwu Nwanna. Na nyocha anyị, anyị ghọtara - na onye na-eti ihe sochiri nzọụkwụ Reginald site na isonyere FC Bijlmer - dịka ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ nwata ya.
Ruo ugbu a, anyị amachaghị banyere Amsterdammer nke nwanne ya nwoke nke obere bụ onye na-azụ ezinụlọ ya. Ruo ugbu a, anyị maara na Reginald gbasoro ụzọ iji bụrụ ọkachamara n'ịgba bọọlụ. Ma ọ dịghị onye maara ma ọ bụrụ na ọ mere ya.
Onye Dutch na-aga n'ihu nwere nwanne nwoke okenye nke aha ya bụ Leandra. Ọ bụ nwanne ya nwanyị nke okenye, nke tọrọ ya afọ atọ. Dị ka ndị ọzọ nọ n'ezinụlọ, Leandra Boadu nwekwara nghọta dị mma banyere egwuregwu ahụ. Myron gwara De Telegraaf otu oge;
Nwanne m nwanyị nke tọrọ m, Leandra Boadu na-elebara m anya nke ọma ma oge ụfọdụ ọ na-agwa m otu m ga-esi họrọ ọnọdụ ka mma maka ebumnuche m.
Ọ bụ onye ndụmọdụ kachasị na ezinụlọ m, mgbe ọ bụla enwere m ohere ọ bụla funahụrụ m ma ọ bụ ọ bụrụ na m nyefe ụzọ na-ezighi ezi.
Ọ na-agwa m mgbe niile: could nwere ike ị gbata ma ọ bụrụ na ị bịara na mbụ post tupu, MA LEE ugbu a, ị bịara nnọọ akaha…. Kinddị Okwu ndị ahụ.
Myron Boadu ikwu:
N'ịbanye n'ime agbụrụ ya, o doro anya na ọtụtụ n'ime ndị ikwu ya bi na Ghana. Mgbe ha amaghị, anyị hụrụ mmadụ abụọ ama ama na aha Boadu na Ghana.
Ha gụnyere James Boadu, onye ọgba bọọlụ Ghana na Mavis Nkansah Boadu, onye bụ onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị Ghana. Onye ọ bụla n'ime ndị a nwere ike ịbụ onye ikwu Myron Boadu?…
Eziokwu Myron Boadu:
N'ịkọkọta akụkọ anyị banyere ndị ọgba bọọlụ Dutch, anyị ga-eji ngalaba a gwa gị ụfọdụ eziokwu banyere ya. Ugbu a ka anyị bido.
Eziokwu # 1: AZ Salary Breakdown and Earnings per Second:
Myron Boadu AZ Alkmaar ụgwọ
Kwa Afọ € 781,200
kwa ọnwa € 65,100
Kwa Izu € 15,000
Kwa .bọchị € 2,143
Kwa elekere € 89
Kwa Nkeji € 1.5
Sekọnd € 0.02
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele Myron Boadu'Bio, ọ nwetara AZ Alkmaar.
… Ebe ọ si bịa, nkezi ụmụ amaala Dutch (na-enweta euro 36.500 kwa afọ) ga-arụ ọrụ maka afọ 21 iji mee ụgwọ ọnwa Myron Boadu kwa afọ na AZ.
Eziokwu # 2: Myron Boadu Net Worth:
Na afọ nke ahụmịhe ọkachamara (ebe ọ bụ na 2017) n'okpuru eriri ya, anyị nwere ike ịsị na o nweela ezigbo ego na bọọlụ. Site na ụgwọ ọnwa ya dị ugbu a nke euro 781,200 kwa afọ, ọnụ ahịa netwọ 2021 nke Myron Boadu ruru ihe dị ka nde euro abụọ.
Eziokwu # 3: Banyere onye ọrụ ya:
Dabere na Market Transfer, Mino Raiola na-achịkwa Myron Boadu, otu n'ime ụwa mkparịta ụka bọọlụ na-enweghị atụ.
Onye na-elekọta Dutch-Italian bọọlụ na-anọchite anya ọtụtụ kpakpando a ma ama, gụnyere Gianluigi Donnarumma, Nke Norway Erling Haaland na ndị Dutch ibe, Matthijs de Ligt - n'etiti ndị ọzọ.
Eziokwu # 4: Ọ bụ FIFA Career Mode Beast:
Maka ndị hụrụ ụdị ọrụ n'anya, zụrụ Myron Boadu, ị gaghị akwa ụta. Ọbụna Mgbalị na-ekwu na ọ nọ n'etiti Football Manager si 2021 iju ụmụaka. Dị ka Allan Saint-Maximin, ọsọ, osooso, na ịmụrụ ike ka bụ akụnụba ya.
Eziokwu # 5: Myron Boadu Religion:
Mgbe a mụrụ ya, nne ya na papa ya nyere ya aha Greek (Myron), nke pụtara "Myrrh". I nwere ike icheta na e kwuru Myrrh n’Agba Ọhụrụ dị ka otu n’ime onyinye atọ ahụ (ya na ọlaedo na frankincense) nke ndị amamihe ahụ si “n’Ebe Ọwụwa Anyanwụ” nyere Jizọs.
Site na atụmatụ a dị n'elu, anyị nwere ike ịsị na nne na nna Baodu bụ Ndị Kraịst. Amụrụ ma bred n'okwukwe, ndị ịgba bọọlụ na-ahọrọ iji okwukwe ya mee ihe n'ụzọ nzuzo.
Ihe omuma nke Myron Boadu na eme ka anyi ghota uzo esi ejikwa onwe anyi mgbe ndu tufuru anyi. Nke mbụ, ọ bụ ihe dị mma maka ndị na-agba ọsọ bọọlụ ihu ndakpọ olileanya na-egbochi ha ịga n'ihu.
A ga-enwe oge mgbe ọhụhụ ọrụ na-eyi ka ọ gaghị eru eru, na-eme ka anyị chee ma ọ dị mkpa ka ị bụrụ ọkachamara n'ịgba bọọlụ kwesịrị ịchụso ma ọ bụ ịlụ ọgụ maka ya.
Lifebogger na-adụ ọdụ ka anyị gaa n'ihu, ekwela ka ụjọ ma ọ bụ ọdịda daa anyị. Ihe anyị kwesịrị ịtụ ụjọ bụ ụjọ ịghara ịnwale ihe ọhụrụ. Myron Boadu si ụzọ ọrụ adịghị mfe. Site na mkpebi siri ike na nkụda mmụọ, ọ ka ruru n'elu.
Ọ dị mkpa Lifebogger ịja nne na nna Myron Boadu na nwanne ya nwoke okenye (Reginald). Ndị a, o meriri nkụda mmụọ nke ịjụ Ajax. Ọ na-afụ ụfụ ịhụ nwatakịrị nwoke tolitere n'ezinụlọ ezinụlọ dị nso na ama egwuregwu Ajax. Ọ hụrụ ụlọ ọrụ ahụ n'anya n'oge ọ bụ nwata, lụrụ ọgụ gbagoro ebe ahụ naanị ka a jụ ya n'agbanyeghị na ọ na-eme nke ọma na ikpe.
Ndị edemede anyị na-eche banyere izi ezi nke akụkọ ndụ ọhụụ nke ndị na-ede bọọlụ Dutch. Ọ bụrụ n’ịchọpụta ihe ọ bụla na - adịghị ele anya na Boadu Bio, biko mee ka anyị mara site na kọntaktị. Anyị ga-enwekwa ekele maka ihe ị kwuru banyere isiokwu a na onye na-eti ihe. Maka njegharị ngwa ngwa nke Profaịlụ ya, biko jiri tebụl anyị wiki.
Aha n'uju: Myron Boadu.
Age: 20 afọ na ọnwa 6.
Ụbọchị ọmụmụ: Bọchị 14 nke Jenụwarị, 2001
Ezinụlọ Ezinụlọ: Ghana
Nwanna: Reginald Boadu (Nwanne nwoke nke okenye)
Nwanna nwanyị: Leandra Boadu (Elder Sister)
Nationality: Netherlands na Ghana.
elu: 1.83 mita ma ọ bụ 6feet 0 sentimita asatọ
Egwuregwu Ọnọdụ: Onye na-egbu ya
Agụmakwụkwọ Bọọlụ: FC Ugochukwu na SC Buitenveldert
Onye nnọchi anya: Mino Raiola